Home News Shirka Soomaaliya ee ka dhaci doono Brussels oo isku badalay fadhi ku...
Shirka Soomaaliya ee ka dhaci doono Brussels oo isku badalay fadhi ku dirir. Dan Soomaaliyeed ma ku jirtaa in dowlada tagto?
Midowga Yurub oo qaban qaabiyay kulanka shirkii Soomaaliya ee looga hadlayo arimah amniga ayaa waxaa uu cabasho u jeediyay dowlada Soomaaliyeed, ka dib markii dowlada Soomaaliya ay soo gudbisay liiska magacyada ka qaybgalyo shirka oo kor u dhaafayo 100 qofood. Qoraal uu u qoray agaasimaha xafiiska Ra’isal Wasaaraha ayuu ku sheegay in magacayada la soo gudbiyay visa loo sameeyo isla markaana tikidhkooda diyaaradaha la bixiyo. Midowga Yurub ayaa markii hore sheegay in ay bixinayaa lacagta ku baxayso shirka waxaana ay u soo gudbiyeen dowlada qaab ay ugu magacdareen 1+2 oo macnaheedu yahay dowlada goboleed kastaa waxaa ka imaanaya Madaxweynaheeda iyo labo wasiir oo ay quseeyso arimaha laga hadlayo. Dhanka fadaraalkana waxaa loo sheegay in uu yimaado wasiirka ay quseeyso oo kaliya kuwaas oo ah sadax wasiir.
RW Kheyre oo isaga laga hor istaagay in uu safarka aado ayaa doonayo in uu fashiliyo MD Farmaajo oo kulankaas tagi doono. Sidaas darteed ayuu waxa uu qortay liis dheer oo ciduu uu is lahaa adiga ayaa ay kula jirtaa uu ku darsaday. Midowga Yurub ayaa cabsi ka qabo in dadka visaha loo soo codsaday qaar badan oo ka mida in ay baxsan doonaan oo ay iska dhiibi doonaan Yurub.
Waa markii ugu horeeysay oo dowlada soomaaliya oo aan u kala harin wasiiradeeda iyo dowlad goboleedyadeeda wadanka dibadiisa looga yeero ilaa intii aan ka baxnay ku meel gaarinimada. Dhanka kale marka aad fiirisid ajandaha shirka dadka ka hadlaya waa kooban yihiin oo waa lix qofood. Maxaa loo aadayaa? Shirkaan waxa uu noqon doonaa mid dhaawac gaarsiiya qaranimada Soomaaliya isla markaana karaamo daro ka soo qaado dowalada Soomaaliya.
Waxaa ilaa Iyo hadda dal ku gal loo dal bay in ka badan 100 iof oo wali dawladdii aysan ku girin, haddaba waayaabe isa qof ayaa lagu tagayaa? Liiska kowaad waa kan. Dhammaan waa liis dad gaar ah, hay’ado NGO ah oo gacansaar lala leeyahay iyo gaar loo leeyahay.
[googlepdf url=”http://46.101.175.207/wp-content/uploads/2018/07/SPF-Brussels-Side-Events-Delegation-List-FINAL.pdf” width=”800″ height=”900″]
Previous articleFahad Yasin oo howlgaliyay Kooxdiisa “Ma liibanayaasha”? Maxay qabtaan?
Next articleGanacsatadii Reer Baydhabo oo diiday in ay Canshuur Bixiyaan?
Somalia: Canada Supports Somalia On Strengthening Midwifery Education and Practice